Jowhar waa magaalo cenykee ah? (Xog-warran uu qoray weriye Maxamed Ibraahim Macallimuu) | Caasimada Online
Home Maqaalo Jowhar waa magaalo cenykee ah? (Xog-warran uu qoray weriye Maxamed Ibraahim Macallimuu)
Jowhar waa magaalo cenykee ah? (Xog-warran uu qoray weriye Maxamed Ibraahim Macallimuu)
Marka ay taarikhdu u eheed 1917 waxa Soomaliya yimid nin Talyaani ah oo la oran jiray Amadao Luigi Duca Degli Abbrizzi oo kamid ahaa qoyska boqortooyada dalka Talyaniga.
Dhowr degaan ayuu tagay oo wabiga shabelle ku dhiriirsan si uu eego deegaan ku haboon tacabka iyo wax soosaarka.
Baaris dheer kadib waxaa u soo baxday in deegaanka jowhar ee ugu haboon tahay beerashada dalagyada kala duwan, taaso ay ugu wacan tahay wabiga oo ka sareeya dhuul beereedka loona bahneyn matooro waraabka loo adeegsado
F.G: Waxaan u mahad celinayaa ustaad Mataaneey Abraa oo gacan ka geystay macluumaadka maqaalkan.
Waxaa qoray Maxamed Ibraahim Macalimuu.